Venezoela: Mampiseho Ny Fiainany Amin’ny Alalan’ny Sary Ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Venezoela: Mampiseho Ny Fiainany Amin'ny Alalan'ny Sary Ny Ankizy
Voadika ny 21 Novambra 2017 4:30 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Oktobra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Fiaraha-miasan'ny sekoly ao Venezoela izay mikendry ny hampianatra ny fomba fakana sary sy ny teknolojia ary ny fahaizana ny fampitam-baovao ho an'ny ankizy any amin'ny tanànakely samihafa na any amin'ny faritra an-tanàndehibe ny Ancla2 [es]. Araka ny nolazain'ny tompon'andraikitra tao amin'ny Ancla2, rehefa tafahaona amin'ny sary ny ankizy amin'ny alàlan'ny fangalana sary, dia fomba iray ahafahan'izy ireo mamantatra sy manome lanja ny momba azy ireo izany. Noho ny Ancla2, nahita fomba vaovao hijerena sy hankasitrahana ny tontolo iainany manokana ireo ankizy avy ao amin'ny faritra sy avy any amin'ny tananakely mahantra, ary nianatra ny fahaiza-manao vaovao ihany koa mandritra izany izy ireo amin'ny sehatra maro izay hanampy azy ireo eo amin'ny fiainany.
Ny fampisehoana andian-tsary mahavariana nalain'ireo ankizy no vokatry ny atrikasan'ny fakana sary [es], ary ankizy maro no afaka mijery ity asa ity satria manana bilaogy mampiseho ny fiainana ao amin'ny tanànakeliny na ao amin'ny faritra fonenany ihany koa ireo ankizy mpaka sary. Mitondra ny “fomba fijerin'ny mpanao gazety” avy amin'ireo ankizy ireo bilaogy izay nosoratan'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 15 taona, toy ireo bilaogy ao amin'ny tanànakelin'i La Mucuy (faritanin'i Merida).
Roa amin'ireo bilaogy ireo ny El Guarataro Preguntón sy Reporteros del 23. Ireo ankizy monina any amin'ireo tanànakely manodidina roa faran'izay mahantra sy ahitana herisetra indrindra ao Caracas no nanoratra izany. Ny hanolotra ny fiainana andavanandro hita ao amin'ny faritra sy ny antony mahatonga ny resaka herisetra momba azy ireo no tanjona manokan'izany bilaogy izany .
Ireto ohatra ny iray amin'ireo lahatsoratra farany avy amin'ny Reporteros del 23:
Naka sary teo amin'ny fiakarana mankany amin'ny “La Planada” i Benjamin . Nisy vehivavy iray teo am-baravaran'ny tranony liana nijery azy hatrany. Tsapany izany ary nanomboka nampiseho ilay ramatoa ireo sary nalainy izy mba ho fisaorana azy .
Hoy ny mpanoratra ny bilaogy El Guarataro Preguntón raha namaritra ny momba azy ireo :
Teraka izahay ary monina ao El Guarataro, faritra malaza indrindra ao Caracas sy ao Venezoelà. Faritra feno fiainana sy nofinofy izany, ary mijaly noho ny herisetra sy ny olana izay tsy mitsahatra ihany koa. Ny tena hamantarana an'i El Guarataro dia ny: fahaterahan'i Aquiles Nazoa teto. Tena mahafinaritra ny zava-drehetra raha toa ka toy ny ao amin'ny tononkalon'i Nazoa avokoa ny zava-drehetra eto El Guarataro. Saingy tsy tanteraka izany, ary namorona ny gazety iray antsoina hoe El Guarataro Preguntón izahay, rehefa avy nandray anjara tamin'ny atrikasa momba ny fakana sary sy ny fanoratana niaraka tamin'ny Ancla2 (izay nianaranay) ny fakana sary sy ny fanoratana gazety mitantara amin'ny firenentsika hoe iza izahay sy ny fomba fiainanay, inona ny zavatra tinay ovaina ary hovaliana izahay isaky ny vakiana ny gazetinay sy hita izahay satria hametraka fanontaniana momba ny zava-drehetra [ izany no mahatonga ny lohateny hoe Preguntón, izay azo adika hoe Fanontaniana] izahay.
Hitantsika ato anatin'ity fanadihadiana antsoina hoe “Voices” ity ny ampahany amin'ny asan'ny ankizy tao Mérida .
Nahazoana alalana avy amin'ny Ancla2 ny sary rehetra.